Samsung Gear S2, ny smartwatch tsara indrindra eny an-tsena? | Androidsis
Alfonso de Frutos | | IFA, hevitra, Samsung, SmartWatch
Ny smartwatches voalohany nahatratra ny tsena dia tsy niavaka tamin'ny famolavolana azy ireo. Miaraka amin'ny Motorola sy ny Moto 360 nanova zavatra. Famantaranandro misy efijery boribory izay nanamarika ny teo aloha sy aoriana tao amin'ny tsena. Ary farany Samsung nisafidy an'ity karazana endrika ity.
Rehefa nanana fotoana hitsapana ny Samsung Gear S2 Tamin'ny fanontana farany an'ny IFA tany Berlin, dia tsy azo resena ireo fihetseham-po. Ny famantaranandro boribory voalohany an'ny orinasa Koreana dia tonga manitsaka ary, araka ny hevitro, io no safidy tsara indrindra raha mitady famantaranandro tsara kalitao ianao, miaraka amina famaranana tsara ary ambonin'izany rehetra izany miaraka amina rindrambaiko tena manintona.
Samsung Gear S2 miaraka amin'i Tizen
Ny Gear S2 dia tena miavaka amin'izany endrika kanto sy milamina. Fitaovana mahafinaritra ny mikasika azy ary raha vao jerena dia toa famantaranandro mahazatra. Zavatra tiako manokana. Ho fanampin'izay, Samsung dia tsy nikarakara ny famolavolana fotsiny.
Ohatra iray amin'izany ny azy Fampisehoana Super AMOLED izay manome maranitra tena tsara, betsaka kokoa raha mihevitra isika fa ny efijery boribory dia 1.2 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 360 x 360 teboka. Ankoatr'izay, Samsung dia nanisy sehatra iray ahafahantsika mivezivezy amin'ireo safidy samihafa nefa tsy mila mikitika ny vera fitaratra. Amin'izany fomba izany dia tsy ho feno dian-tongotra toy ny fijerena ny fijerena ny fifaninanana.
Raha ara-teknika dia tsy dia miovaova be raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy: processeur dual-core, RAM 512 MB, fitehirizana anatiny 4 GB, mahatohitra rano ... mahazatra ho an'ny famantaranandro marani-tsaina. Ny teboka mahaliana dia miaraka amin'ny rafitra fiasanao. Ary ny Samsung dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny vahaolana manokana aminy, handositra ny Android Wear. Amin'ity tranga ity dia nampiasa ny rindrambaiko ny mpanamboatra Tizen, izay avy amin'ny zavatra afaka nanamarinay, dia OS iray somary feno.
Afaka mifandray amin'ny telefaonintsika isika amin'ny alàlan'ny fampiatoana ireo asa samihafa amin'ny alàlan'ny baiko am-peo na fampiharana fampiharana toy ny S Health, Find my Device, Nike + Mihazakazaka ankoatry ny safidy hafa.
Raha tsy te hitondra ny telefaona anao koa ianao dia misy a Andiany 3G Izy io dia misy slot karatra SIM ary hamela anao hampiasa ny Samsung Gear S2 ho toy ny famantaranandro mitokana, tsy mila mampifandray telefaona iray.
Ny Samsung Gear S2 dia andrasana namely ny tsena nandritra ny volana Oktobra tamin'ny vidiny 349 euro ho an'ny kinova mahazatra sy 449 euro ho an'ny maodely misy fifandraisana 3G. Tsy maintsy miandry isika vao hitsapa ny fizakan-tena amin'ity famantaranandro ity, iray amin'ireo lafiny izay ahalavoana indrindra ity karazana fitaovana ity, hahitana raha mifanaraka amin'ny filan'ny andavanandro izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Gear S2, ny smartwatch tsara indrindra eny an-tsena?
Fran dada dia hoy izy:
Slot SIM. Azafady, ampahafantaro ny tenanao alohan'ny hanoratanao ilay lahatsoratra. Izy io dia kinova miaraka amin'ny E-Sim ary noho izany dia tsy ho hita any Espana raha tsy avelan'ny EU ity rafitra ity. Na izany na tsy izany…
Mamaly an'i Fran papasito
Wiko Rainbow JAM, 5 santimetatra misy famahana HD latsaky ny € 140